दुई दिनमा सिरहा प्रहरीले के के गरे ? | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home मुख्य समाचार दुई दिनमा सिरहा प्रहरीले के के गरे ?
: March 03, 2017 : मुख्य समाचार, समाचार, स्थानियNo Comments
सिरहा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले प्रहरीले गरेको हरेका गतिविधका वारेमा संचारकर्मीहरुलाई इमेल मार्फत जानकारी गराउने गरेका छन् । विहिवार र शुक्रवार प्रहरीले के के गरे ? त्यसको वारेमा पनि इमेल गरेका छन् ।
सिरहाको सिमावर्ती गाविस बरियारपट्टि ५ स्थितमा भारतबाट भन्सार छली नेपाल ल्याईरहेको अवैध समान बरामद गरेका छन् । गस्ती प्रहरी टोलीले पाँच हजार रुपैयाँ बरावरका बिभिन्न किसिमका सामानहरु बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेका छन् । बरामद गरीएका समान आवश्यक कार्वाहीको लागी भन्सार कार्यालय बुझाईएको जिल्ला प्रहरी सिरहाले जनाएका छन् ।
सिरहा नगरपालिका १७ बाट तिनजनालाई पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सोही नपाका वडा २ बस्ने रक्की भन्ने दिपेन्द्र कुमार यादव(२१), प्रमोद कुमार यादव(२९) र नपा ७ का राज कामती(१९) रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु होहल्ला गरिरहेको अबस्थामा गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले सम्झाउन खोज्दा उल्टै प्रहरीलाई अश्लिल शब्दमा गाली तथा हातपात गर्न खोज्दा पक्राउ गरेका हुन् । साथै सार्वजनिक स्थानमा अशान्ति मच्चाएकोले उनीहरुलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा अन्तर्गत कानुनी कार्वाही अगाडि बढाईएको प्रहरीको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिरहा नगरपालिका ११ मा उच्च मावि भलुवाही स्कुलको प्राग्ङणमा विद्यालय सम्पर्क भिडियो प्रदर्शन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा सयौँ भन्दा बढीको सहभागिता रहेको प्रहरीले बताए ।
सिरहा नगरपालिका १७ स्थितबाट अवैध रुपमा भारतबाट भन्सार छली नेपाल ल्याईरहेका २१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँको समान बरामद गरेका छन् । बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेका विभिन्न किसिमका कपडाहरु आवश्यक कार्वाहीको लागी भन्सार कार्यालय बुझाईएका छन् ।
महिला तथा वालवालिका कार्यालय सिरहाको सभा हलमा घरेलु हिंसा र मानब वेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधबाट कसरी जोगिने सम्बन्धि ५०/६० जना महिलाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट प्रशिक्षण दिईएको छ ।
सम्ममा ट्राफिक प्रहरी समेतको प्रहरी टोलीले चेकिङ गर्ने क्रममा ट्राफिक नियम उल्ङघन गरी बिभिन्न किसिमका ८२ वटा सवारी साधनहरुलाई कार्वाही गरी ५३ हजार जरिवानाबाट राजश्व संकलण गरिएको छ ।
भगवानपुर गाविस वडा ६ स्थितमा केयर नेपाल र दलित महिला कृषक संघको सहयोगमा ४० घर स्थानीय दलित परिवारलाई २ कठ्ठाको दरले जम्मा ४ बिगहा जग्गा १० वर्षको लागी बितरण गरेका छन् । सो कार्यक्रममा डेनमार्कका राज कुमार होल्गर भन्ने योकिम होल्गर वाडमार क्रिष्चियन समेत उपस्थिति थिए । त्यस कार्यक्रममा प्रहरीले सहयोग गरेका छन् ।